Banyere Companylọ ọrụ
Kedu asambodo ụlọ ọrụ gị nwetara?
Uniwell enwetala SC, Ksoher, Halal, non-GMO, mbubata na mbupụ nzere, nnweta nnweta ikike, ibu ibu njem, wdg.
Ugbu a zubere inweta: ISO9001, HACCP, FSSC22000
Kedu ngwaahịa ị nwere?
Uniwell Bio na-ewepụta soybean wepụ na polygonum cuspidatum wepụ dị ka ngwaahịa ndị na-eduga, andrographis wepụ, phellodendron wepụ, epimedium wepụ, olive wepụ na ngwaahịa ndị ọzọ nwere mmepụta uru na Sichuan dị ka mmeju, ọnụ na-etolite ngwaahịa Ọdịdị nke a fighter nlereanya.
Anyị mmepụta nke soybean wepụ bụ mgbasa na ọganihu nke mbụ ahụmahụ, na anyị bụkwa ndị kasị ibu soybean wepụ mmepụta ụlọ ọrụ na China. Ndị otu njikwa nwere ihe karịrị afọ 20 nke mmepụta na ahụmịhe ahịa na ngwaahịa a.
Usoro na nkọwa nke imekọ ihe ọnụ
1.Pkwụ ụgwọ Okwu, Ọnụego mgbanwe
Kedu usoro usoro ịkwụ ụgwọ ị na-akwado na ihe kpatara ọnụahịa ngwaahịa a ji agbanwe?
Ihe Nlereanya & Ihe Nlele: Anyị na-enye ihe nlele maka ule na ụgwọ maka ihe atụ gafere oke. Akwụ ụgwọ ihe atụ na iwu nlele chọrọ ka anapụta gị mgbe ịkwụchara ụgwọ.
Nkwado mbụ: Anyị na-achọ ịkwụ ụgwọ tupu oge eruo maka nkwado mbụ nke ndị ahịa.
Ogologo oge Ahịa: N'ihi na obere iwu nke na-erughị 1000 yuan, nnyefe ga-mere mgbe nnata nke ịkwụ ụgwọ. Maka ndị ahịa ogologo oge, ngalaba ego anyị nwere oge ndekọ ego hierarchical, nke kachasị ogologo karịa ụbọchị 90.
Okwu mentkwụ :gwọ: E nwere usoro akwụmụgwọ dị iche iche maka ndị ahịa dị iche iche, n'ozuzu ụbọchị 30-90 ụbọchị.
2.Packaging, Mbupu Port, ationgbọ njem Cycle, Lading
Kedu ka ị ga - esi zere mmebi nke ngwaahịa gị?
Otutu mbukota: kaadiboodu rụọ ma ọ bụ dum akwụkwọ rụọ rụọ nkwakọ, drum size bụ Ø380mm * H540mm. Ime mbukota bụ abụọ ọgwụ plastic akpa na a na-acha ọcha plastic cable tie. Mpụga mbukota akara bụ akara akara ma ọ bụ akara ọcha teepu. A na-eji ngwugwu ahụ jide 25KG.
Ngwugwu Size: Dum akwụkwọ drum (Ø290mm * H330mm, ruo 5kg)
(Ø380mm * H540mm, ruo 25kg)
Ringgwè mgbanaka ígwè (Ø380mm * H550mm, ruo 25kg)
(Ø450mm * H650mm, ruo 30kg ma ọ bụ ngwaahịa dị ntakịrị 25kg)
Katọn (L370mm * W370mm * H450mm, ruo 25kg)
Akwụkwọ Kraft (ihe ruru 20kg)
Ofzọ nke njem: 3zọ 3 na njem ụlọ nke bụ lọjistik, awara awara na njem ikuku. International njem ụzọ bụ site ikuku na oké osimiri, tumadi si Ningbo, Tianjin, Beijing na Shanghai ọdụ ụgbọ mmiri.
Nchekwa ọnọdụ: Nọgidenụ na-anọkwasị na ụlọ okpomọkụ n'ebe ìhè, irè maka 24 ọnwa.
Meaures Nchedo: Iji akpa ejiri akwa na mpụga nke mkpọ na njem nke ụlọ; Transportgbọ njem mba ọzọ site na iji pallets na gbatị ihe nkiri.
Cyclegbọ njem: Site Oké Osimiri- A ga-etinye ngwaahịa n'ime ụlọ nkwakọba ihe n'ime otu izu ma ọ bụrụ na enwere ngwaahịa, usoro mbufe ahụ ga-abụ ihe dịka izu 3; Site na ikuku- A na-ahazi ụgbọ elu n'ime otu izu mgbe enyere iwu.
You na-akwado iwu OEM na ogologo oge ka nnyefe ahụ dị?
Sample nnyefe: samplesgachi samples n'ihu 3:00 pm na weekdays nwere ike ịnapụta na otu ụbọchị ma ọ bụghị ga-anapụta na-esote ụbọchị.
Sample ibu: 20 g / akpa n'efu.
OEM nhazi: Anyị na-anabata iwu maka ngwaahịa nkọwapụta pụrụ iche dịka obere plasticizer, obere ihe mgbaze, PAH4 dị ala, obere benzoic acid soy isoflavones. Ogo kacha nta nke obere benzoic acid soybean isoflavones bụ 10KG ugbu a na oge nnyefe bụ 10 ụbọchị. Ngwaahịa OEM ndị ọzọ kwesịrị ịkọwa ọdịiche nke usoro nhazi dịka ngwaahịa si dị.
Ndepụta Ngwaahịa: Soybean isoflavones, nnwale nke 5% - 90% niile dị na ngwaahịa. Onu ogugu di elu bu: 5% 2MT, 40% 2MT, 40% low plasticizer 500KG, 40% low solvent residual 500KG, 40% low PAH4 500KG, 80% 200KG, 90% 100KG.
Oge Mbuga ozi: Maka ngwaahịa nwere ebuka oge niile, oge nnyefe bụ ụbọchị 2. Maka ngwongwo ndị ahụ na-enweghị ebuka nwere ike ịchọ ịgwakọta na oge nnwale, ọkachasị usoro nchọpụta microbial dị ogologo, yabụ na oge nnyefe bụ ụbọchị 7.
4.Main ahịa na iche ahịa chọrọ
Kedu isi ahia ndi ahia gi? Ma nwere ike izute ahịa chọrọ?
Main Markets: USA, Brazil, Belgium, Italy, Russia, France, South Korea, Vietnam.
Chọrọ Market Market:
USA: Ndị na-abụghị ndị anwụ, ndị na-abụghị GMO, ihe mgbaze fọdụrụ <5000PPM.
Europe: Na-abụghị Irradiation, Non-GMO, PAH4 <50PPB, ihe mgbaze fọdụrụ (methanol <10PPM, ọ dịghị methyl acetate achọpụtara, mkpokọta ihe mgbaze ihe fọdụrụ <5000PPM).
Japan na South Korea: Na-abụghị Irradiation, Na-abụghị GMO, ihe mgbaze fọdụrụ <5000PPM, benzoic acid <15PPM.
Kedu ka ụlọ ọrụ gị si enye ọrụ mgbe erechara?
Mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-achọpụta na ngwaahịa ahụ erughị eru ma ọ bụ na-adịghị mma, a ga-ebute Usoro Nchịkwa Ngwaahịa na usoro njikwa mma. Mgbe onye ahịa welitere ihe mgbochi ngwaahịa a, ụlọ ọrụ nyocha nke onwe ya ma ọ bụ nyocha nke atọ ga-eme iji gosipụta ma ngwaahịa a enweghị nchekwa ma ọ bụ na ọnaghị emezu ihe ndị a chọrọ. Ọ bụrụ na akwadoro ngwaahịa nkwarụ, bido usoro ncheta dị ka ngwaahịa echekwara echedo. Mgbe ahụghị ihe na-adịghị ahụkebe na ule nke atọ, gwa ndị ahịa ahụ ka ha jikọọ usoro ule ahụ ma kpaa nkata okwu ndị sochirinụ.
6. Ndepụta Ngwaahịa, Tụkwasịnụ ikike
Kedu ngwa ahịa ngwaahịa gị na ike inye ya?
Ikike Uniwell Bio kwa afọ bụ 6,000 tọn nke ọgwụ, na ngwaahịa na ngwaahịa dị na tebụl ndị a:
Ike kwa ufodi
Soy isoflavones 80%
Soof isoflavones na-agbaze mmiri 10%
Polygonum Cuspidatum wepụ
Kedu uru nke ụlọ ọrụ gị na isi ihe ị na-ere nke ngwaahịa gị?
Ihe mgbaze fọdụrụ
Soy Isoflavones 5% ～ 40% Zọ mgbaze Agba aja aja na-acha odo odo <10 PPB <40 PPM
Soy Isoflavones 80% Zọ mgbaze Nchapụ ọcha Methanol <10 PPM <20 elekere
Ndị ọgbọ ụlọ ọrụ
Soy Isoflavones 5% ～ 40% Zọ mgbaze Ìhè odo Methanol 30-50 PPM 300-600 PPM
Soy Isoflavones 80% Zọ mgbaze Nchapụ ọcha Methanol 30-50 PPM 100-300 PPM
2. Ndabere nke akụrụngwa
Kedu ka ị si ejikwa ogo akụrụngwa?
Akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị niile sitere na mpaghara ndị na-abụghị GM soybean na Heilongjiang, China. Anyị ga-anwale ngwa ngwa ma nwee ụkpụrụ dị mma.
Ngwaahịa gị anaghị agbanwe agbanwe?
Soybean bụ ihe na-akpata nfụkasị ahụ, a ga-akwụnyekwa nlebara anya pụrụ iche na nke na-abụghị GM. China na-ebubata 60% nke soybean ya, ọtụtụ n'ime ha na-agbanwe ngwaahịa (GM). Ngwa niile ụlọ ọrụ anyị zụtara sitere na soybean na-abụghị GM na mpaghara Heilongjiang na-emepụta. Ndị na-eweta ngwaahịa niile nwere sistemụ na-abụghị GM (IP) ma gafere asambodo na-abụghị GMO.
Companylọ ọrụ anyị eguzobewokwa usoro dị mkpa, ma nyefee akwụkwọ ikike na-abụghị GMO.
4.Ahịa nke ngwaahịa
Gịnị bụ isi ahịa nke ngwaahịa gị?
Isi ahịa: United States, Brazil, Belgium, Italy, Spain, Russia, France, Japan, South Korea, Vietnam na ahịa ụlọ nke ngwaahịa nlekọta ahụike.
Kedu ihe bụ usoro nke usoro soybean gị?
E kewara Soybean isoflavones na ngwaahịa ndị sitere n'okike na ngwaahịa sịntetik, nke ọdịnaya ha sitere na 5 ruo 90%.
Zọ mgbaze Agba aja aja na-acha odo odo <10 PPB <40 PPM
Zọ mgbaze Nchapụ ọcha Methanol <10 PPM <20 elekere
Zọ mgbaze Ìhè odo Methanol 30-50 PPM 300-600 PPM
Zọ mgbaze Nchapụ ọcha Methanol 30-50 PPM 100-300 PPM
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 12 awa.